7 Dingana ifandezan'ny famoahana EDP frameworks Edit | View
7 Dingana ifanakalozan-kevitra momba ny fahaiza-manaon'ny IT
vaovao Fahaizana #IT dia ilaina amin'ny fanatanterahana ny famolavolana ny fanavaozana, ohatra, ny fitantanana ny famolavolana ny famolavolana, ny fitantanana, ny fitantanana ny tombon-tsoa, ​​ary ny toy izany. Ny fanontaniana dia hoe, "Moa ve ianaoIreo solontenan'ny T dia efa voaomana tsara sy ampy fahaizana hanamafy ny fananganana, ny fampiharana, ny fampiasana ary ny fitantanana ny fanavaozana vaovao? "
Ny fandefasana ny rafitra fahaiza-manao momba ny IT dia tsy fihetsiky ny saina na dia eo aza ny andraikiny, andraikitra sy fananana. Amin'ny farany, dia hitondra anjara biriky amin'ny fampiasam-bola amin'ny fampiasam-bola (ROI) ho an'ny orinasa. Azonao atao ny mieritreritra an'izany ho toy ny vola mifandraika amin'ny fitazonana ny fanavaozana efa lasa. Ny fanavaozana tsy misy farany dia mitarika amin'ny fanitarana Ny fandaniana manontolo (TCO), mety ampiasaina amin'ny fampiasana ambony kokoa (OPEX) ary nihena ny fanomezana an-tserasera (NPV).
Taorian'ny fisainana momba ny fandraisako anjara amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo orinasa IT mba handefasana ny rafitra momba ny fahaiza-miasa ara-teknika, dia nampiditra ny paikadim-panafihana fito aho na ny dingana lehibe. Ny zavatra tsy maintsy atao hotsaroana dia fomba fanao latsa-paka io, izay midika fa tsy mihatra amin'ny dingana fahafito ilay hetsika. Ny fiovana tsy tapaka ao anatin'ny fikambanana dia tsy azo ihodivirana. Amin'izany fomba izany, ny fikambanana dia tokony handinika indray ny fomba nanamafisany ny fahaiza-manaon'ny fahaiza-manao ho amin'ny tanjona manan-danja eo amin'ny raharaham-barotra. Ny tsirairay amin'ireo dingana fito dia miresaka momba ireo tsipiriany marim-pototra.
Dingana 1: Fantaro ny tari-dalana manan-danja ao amin'ny fikambanana.
Dingana 2: Fantaro ny dikan'ny hoe manana ny fahaizana marina.
Dingana 3: Ataovy ny fanoloran-tena hanoritsoritra ny fahaiza-manao ilaina.
Dingana 4: Fantaro ireo fahaiza-manao ilaina.
Dingana 5: Manomana fiomanana amin'ny fahaiza-manao.
Dingana 6: Tontolon'ny fahaiza-manao.
Dingana 7: Mahaiza manana fahaizana ilaina.
Ny tena zava-dehibe, ny fanapahan-kevitra momba ny fitarihana fototra amin'ny fikambanana dia ivon'ny fanovana eo amin'ny varotra. Inona no ho toetry ny hoavy? fitadiavam-bola? Ny fahaiza-manaon'ny IT ilaina ve ny manampy ny orinasa hahatanteraka ny ho aviny? Inona avy ireo mpiara-miasa ara-barotra miandry ny fikambanana iraisam-pirenena? Mazàna ao amin'ny fikambanana ho an'ny fomba fijery sy ny andrandrain'ny sokajy manokana izay tsy mifanaraka amin'ny an'ny fikambanana IT. Ny dingana voalohany dia ny fametrahana mazava ny làlana ifantohan'ny raharaham-barotra.
Ny dikan'ny hoe manana ny fahaiza-manao tsara dia ekena amin'ny alalan'ny fampiasana ny ROI amin'ny orinasa, ny fanohanana ny mpiara-miasa ary ny fampiroboroboana ny fandaharan'asa IT mba hanamafisana ny fitarihana lehibe amin'ny orinasa. Ny fananana fahaiza-manao tsara amin'ny fotoana mety dia mametraka ny fikambanana IT amin'ny toerana iray handraisana, hamantatra sy hitazomana ny fahaiza-manao vaovao ho an'ny fanovana eo amin'ny varotra. Ny fananana fahaiza-manao tena marina dia zavatra hafa ankoatry ny fahaiza-mampiasa IT. Ny fandefasana rafitra momba ny fahaiza-manao IT dia mitaky ny fahaiza-miasa amin'ny IT dia manana fifandraisana tsy tapaka amin'ny sehatra manokana, hahatakatra ny tanjon'ny orinasa sy ny teknika ary hahafantatra ny fototra ijeren'ny mpanjifa sy ny zavatra antenainy. Ny fahaizana manokana, ohatra, ny fifandraisana, ny fifampiraharahana, ny fitantanana ny mpiara-miasa, ny fitantanana ny fitantanana, ary ny fitantanana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa, dia miharihary fa ilaina tsikelikely.
While sending IT rafitra fahaiza-manao, ny fanoloran-tena hanao toy izany dia tokony hisy amin'ny ambaratonga rehetra ao amin'ny fikambanana avy amin'ny fanohanana ofisialy sy ny tompon-daka amin'ny antony ho an'ny fiarahamonina misy ny olon-tsotra rehetra dia ny maha-olona ny takiana amin'ny hetsika. Ny zava-dehibe tokony hotsaroana dia ny mandefa IT rafitra fahaiza-manao dia fihetsiketseham-pananganana organisation sy matihanina fa tsy fanatanterahana ny famonoana. Noho ny tsy fahafahan'ireo olona notakiana tao anatin'io dingana io dia nahatsapa ho sahiran-tsaina noho ny fampiharana, dia manjavozavo kokoa izy ireo mba hifantohana amin'ny fiantohana ny firoboroboany. Ny mahazatra ny zavatra atao dia iray amin'ireo tombontsoa lehibe amin'ny fanatanterahana ny EDF. Ny fikambanana dia mikisaka tsy tapaka amin'ny faniriany hampita ny rafitra momba ny fahaiza-manao IT satria izy ireo dia manandrana ny fampiasana azy ho toy ny hetsika tsy voatery hampihatra izany amin'ny fampiharana azy isan'andro. Ny fari-pahaizana lehibe manan-danja dia manome ny olona ny tahan'ny foto-drafitr'izy ireo manokana amin'ny fandefasana rafitra IT.
Ity fivoarana ity dia mitaky ny fananganana toeram-piasana izay takiana ao anatin'ny fikambanana mifanandrify amin'ny faritry ny faritra samihafa. Ny fankatoavana ny fahaiza-manao manan-danja dia mamela ny fikambanana handinika ny toetrany ankehitriny ary hanangana ny ho avy. Izahay dia fantatry ny ankamaroan'ny olona fa manana ny fahaiza-manao ilaina izy ireo na dia misy aza ny fahaiza-manao ilaina amin'ny fandrosoana amin'ny fahaiza-manao fototra ao anatiny. Ity fivoarana ity dia mifantoka amin'ny ampahany ny fibodoana, izay tsy mitovy amin'ny an'ny andraikitra. Ny fikambanana dia mifarana tsy tapaka amin'ny toe-javatra mampalahelo rehefa mifantoka amin'ny ampahany ny asa momba ny asa sy ny asa aman-draharaha ataon'ny olona ao anatin'io faritra io. Ny fanavahana ny ampahany andanin'ny fanjakana sy ny fahaiza-manao dia tokony hesorina amin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao. Ny fizarana ny ampahany dia mety ho karazam-bavaka mba hanomezana fomba iray tsy mibaribary sy mampihetsi-po ho an'ny olona handehanana manomboka amin'ny ambaratonga iray ary amin'ny manaraka, na koa eny anelanelan'ny lafiny iray, mifanelanelana eo amin'ny sehatra fifandraisana.
Raha vao voatsindry ny ampaham-batana amin'ny toeran'ny fanjakana dia ny fanandramana manaraka dia ny fanadihadiana ny fahafaha-maivana azon'ny olona maro ao amin'ny fikambanana. Ataovy an-tsaina: hetsika fampandrosoana matihanina izany, fa tsy fanatanterahana ny fampiharana. Manome hery ny olona hanavaka ny fahaizan'izy ireo matihanina ary mametraka ny dingana ho an'ny fanatsarana ny fanatsarana. Ny fanamarinana fahaiza-mandanjalanja iray dia tokony hampidirina ny fahaiza-manaon'ny fahaiza-manao eo amin'ny sehatra tsirairay, ao anatin'ny faritry ny sehatra iraisam-pirenena ary farany amin'ny alalan'ny rafitra rehetra ao amin'ny IT.
Amin'izao fotoana izao dia afaka manatsara ny fanatsarana sy ny fanomanana tetik'asa izay ampifanarahana amin'ny fahaiza-manao ilaina izay ilaina. Ny fahitana ny fahitana ny fahaiza-miaina misy eo amin'ny sehatry ny fahaiza-manao dia manome hery ny fandaminana mba hahitana tsara ny toerana tokony hanatsarana sy ny fanomanana ny fampiharana mba hampitomboana ny haavomam-pitomboana mba hampandrosoana sy hanomanana drafitra ny fandaniana. Amin'ny toe-javatra izay takiana avy hatrany ny fahaiza-manao, dia manampy ny fikambanana hisafidy izay zavatra tokony horaisina amin'ny alàlan'ny fananana na fifanarahana amin'ny olona manana izany fahaiza-manao.
Ity no fanombohana ny dingam-pifandraisana miverimberina mba hamerana ny lavaka fahaizana. Satria mahazo fahaiza-manao vaovao ny olona amin'ny alàlan'ny fampandrosoana sy fanomanana ny fampiharana, dia afaka mamerina ny tenany indray izy ireo. Satria ny fivoaran'ny raharaham-barotra dia mivoatra hatrany ho an'ny fikambanana, ny teknolojia dia hivoatra toy izany ary hamela ny fanovana hamerenana ny rafitra, ny endrika, ny rafitra fandaminana, sy ny sisa. Noho izany dia mitaky fanilikilihana tsy tapaka ny fanombanana ny fahafaha-milefin'ny drafitr'asa IT. Rehefa nahavita ny fivoaran'ny fampitaovana teknolojian'ny fahaiza-manao iray ny orinasam-panjakana, dia efa vita ny ankamaroan'ny fampiasam-bola ankehitriny.
Ny fikambanana IT dia tsy maintsy miantoka fa manana ny fahaiza-manao tsara izy ireo amin'ny fotoana tonga lafatra mba hanamafisana ny fitarihana fototra amin'ny orinasa. Ny fampitaovana teknolojian'ny fahaiza-manao IT dia manome fahafahana ny fikambanana IT mba hanapa-kevitra ny halehiben'ny famindrana azy amin'ny fanavahana ny toerana misy ny tsangambatombana sy ny fananganana rafitra ho an'ny fifandirana ireo lavaka ireo. Tahaka ny fanavaozana, ny fitazonana ny rafi-pampianarana IT dia hanohy hampiroborobo ny fandraharahana raha tsy mitazona izany fa mbola hampiroborobo indray ny fahaiza-manaony.
Fomba hanatsarana ny fahombiazan'ny tetikasa amin'ny tetikasa Fampiasa amin'ny tetikasa
Tontolo iainana mihetsi-po - Ny fanalahidin'ny fahombiazana